SAWIRRO: R/wasaaraha magacaaban oo Dalab culus hordhgay Xildhibaanada Beelaha HAWIYE | Somalia News
SAWIRRO: R/wasaaraha magacaaban oo Dalab culus hordhgay Xildhibaanada Beelaha HAWIYE
Maxamed Xuseen Rooble Ra’iisul Wasaaraha magacaaban ee dalka ayaa la kulmay Xildhibaannada iyo Mas’uuliyiinta qaar ka mid ah beellaha Soomaaliyeed ee sugan Muqdisho.
Kulanka ayaa ku saabsanaa taageerida Ra’iisul Wasaaraha iyo sidii codka kalsoonida uga heli lahaa Baarlamaanka, iyadoo ay goobta joogeen ku dhawaad 50 Mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale kulankaan ka qeyb galay Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa dadaal ugu jira kasbashada Xildhibaannada sidii kalsoonida u siin lahaayeen.
The post SAWIRRO: R/wasaaraha magacaaban oo Dalab culus hordhgay Xildhibaanada Beelaha HAWIYE appeared first on Somali News Leader.
Previous articleKooxo hubeysan oo maanta dil ka gaystay MUQDISHO
Next articleBeesha caalamka oo qoraal niyad jab ah ka soo saaray Heshiiskii doorashada Muqdisho